“Waa waqtigii uu daafac ku guuleysan lahaa abaal-marinta Ballon d’Or” – Van Dijk – Gool FM
(Liverpool) 12 Nof 2019. Daafaha reer Holland iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa aaminsan in la joogo waqtigii uu daafac ku guuleyan lahaa abaal-marinta Ballon d’Or ee maahan xiddig khadka dhexe ama weerarka ka ciyaara.
Liiska 30-ka ciyaaryahan u sharaxan ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2019 oo ay haacisay majalada France Football ayaa waxaa ku soo baxay daafaca reer Holland iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk.
Virgil van Dijk ayaa ku bixiyay kooxda Liverpool laba xilli ciyaareed aad u wanaagsan, isagoo ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican Yurub sannadka 2019, laakiin wuxuu ku fashilmay inuu ku guuleysto FIFA The Best ee ah ciyaaryahanka ugu fiican adduunka 2019, taasoo uu ku guuleystay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Yeelkeede, Virgil van Dijk ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Goal.com” wuuu ku sheegay:
“Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii uu daafac ku guuleysan lahaa abaal-marinta Ballon d’Or, way igu adag tahay inaan fahmo sida ay wax u dhacaan”.
Si kastaba ha noqotee, Virgil van Dijk ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay wuxuu door weyn ka ciyaaray in Liverpool uu ku hogaamiyo ku guuleysiga tartanka Champions League markooda lixaad ee taariikhda”.
Laacibka Kooxda Real Madrid ee Luka Modric oo ku guuleystay abaal-marinta Golden Foot